Azo resahina: Manangana, manara-maso, manandrana ary manadihady programa momba ny referansa momba ny e-commerce | Martech Zone
Araka ny Fikambanan'ny mpivarotra vava mitatitra fa isan'andro isan'andro any Etazonia, dia eo amin'ny 2.4 miliara eo ho eo ny resaka mifandraika amin'ny marika. Araka an'i Nielsen, 90% ny olona matoky ny tolo-kevitry ny orinasa avy amin'olona fantany
Ny fitondran-tena amin'ny fividianana dia nisy heriny teo amin'ny fiaraha-monina hatramin'ny nanombohan'ny fotoana. Ela be talohan'ny tambajotra sosialy toy ny Facebook sy Twitter dia nitahiry anao tamin'ny loop virtoaly dia nisy fiatraikany tamin'ny zavatra novidinao sy ny toerana nividiananao azy ny tamba-jotra anao. Raha ny marina, ny vava no hery matanjaka indrindra amin'ny fitondrana orinasa vaovao. Izany dia satria fantatry ny namana ny tianao hovidiana, ny fotoana tianao hividianana azy, ary ny fomba hivarotana azy aminao. Talkable
Talkable dia manampy ireo orinasan-kaonty Ecommerce hahazo mpanjifa vaovao sy hampitombo ny varotra
Manaova azo namboarina Refer a namana fandaharana. Ny sehatra Talkable dia miovaova tanteraka amin'ny hoe iza no kendren'ny fampielezan-kevitra, ny fahitana azy, iza no valisoa ary ny valisoany.
lalana ny fividianana tranokala sy ny anjaran'ny mpanjifa mba hanomezana valisoa ireo mpisolovava sy namana fotsiny rehefa mahafeno ny fepetra napetrakao amin'ny fampielezana.
fitsapana tolotra hanamafisana ny fahombiazan'ny programa referral. Ny marika dia tsy maintsy mahita ny fandanjana lavorary eo amin'ny haben'ny tolotra sy ny isan'ny varotra vokarina. Ny sehatra dia mamela anao hanao famolavolana fitsapana A / B, kopia ary fikorianan'ny mpampiasa ihany koa.
Fakafakao ny dingana rehetra ao amin'ny fantsona; manomboka amin'ny fizarana ka hatramin'ny tsindrio mankany amin'ny fitsidihana tranokala ka hatramin'ny fividianana. Talkable dia manome tahirin-kevitra momba ny referansa azonao itokisana.
Talkable dia manana fametrahana tsindry tokana amin'ny Shopify, Magento, ary Demandware. Raha mampiasa sehatra e-varotra hafa ianao, dia manana API voarakitra an-tsoratra i Talkable.
Mila fampahalalana bebe kokoa? Talkable dia namoaka boky torolàlana momba ny Referral Marketing antsoina hoe From Science to Purchase, miaraka amin'ny fampahalalana momba ny atao hoe marketing referral, ny antony mahomby tokoa, ohatrinona no tokony andoavanao vola amin'ny referrals, ary ny fomba fananganana tetikady marketing mahomby.
Misintona avy amin'ny siansa mankany amin'ny fividianana
Tags: APIDemandwareeBookreferansy ecommercemanomboka amin'ny siansa ka hatramin'ny fividiananabokymagentobonus referralmarketing amin'ny referralprograma fandalinanashopifybe resakaWhitepaper